2021 – Year – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Resident Evil: Infinite Darkness (2021) Season 1 Complete Unicode 2021 တိုတိုတုတ်တုတ် ၄ပိုင်းပဲပါတဲ့ Animation Series လေးဖြစ်တဲ့ Resident Evil: Infinite Darkness Season 1 ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Resident Evil Animation ဇာတ်ကားတွေနှစ်သက်သူတွေအတွက် အကြိုက်တွေ့စေမှာပါ။ နာမည်ကြီး Capcom Games ကို အခြေပြုပီးဖန်တီးထားတာဆိုတော့ ဂိမ်းဆော့ဖူးတဲ့သူတွေကတော့ ဒီ Series နဲ့သိပ်စိမ်းနေမယ်မထင်ပါဘူး ဒီ Series ကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Aung Khant Phyo ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi 2021 တိုတိုတုတ္တုတ္ ၄ပိုင္းပဲပါတဲ့ Animation Series ေလးျဖစ္တဲ့ Resident Evil: Infinite Darkness Season 1 ကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ Resident Evil Animation ဇာတ္ကားေတြႏွစ္သက္သူေတြအတြက္ အႀကိဳက္ေတြ႕ေစမွာပါ။ နာမည္ႀကီး Capcom Games ကို အေျချပဳပီးဖန္တီးထားတာဆိုေတာ့ ဂိမ္းေဆာ့ဖူးတဲ့သူေတြကေတာ့ ဒီ Series နဲ႔သိပ္စိမ္းေနမယ္မထင္ပါဘူး ဒီ Series ...
TMDb: 8.1/10 278 votes
Sweet Tooth (2021) Season 1 Complete Unicode ရိုးရှင်းတဲ့ဘဝလေးကို အေးချမ်းစွာဖြတ်သန်းနေတဲ့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ရဲ့ဘဝထဲကို Sickလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ ပလိပ်ရောဂါလို ကပ်ဆိုးတွေကိုခေါ်ဆောင်လာတဲ့ ရောဂါဆိုးတစ်ခုဝင်ရောက်လာတာကြောင့် လူသားတွေသွေးပျက်ဖွယ် အသက်ဆုံးရှုံးကြရပါတော့တယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ လူသားတွေဆီကို လူတစ်ပိုင်း တိရစ္ဆာန်တစ်ပိုင်း hybridသတ္တဝါလေးတွေကပါ တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဝင်ရောက်လာပြန်ပါတယ်။ ရောဂါဆိုးရဲ့ဇစ်မြစ်ကိုရော ဒီhybridလေးတွေရဲ့ ဇစ်မြစ်ကိုပါ ဘယ်သူမှသေချာမပြောနိုင်တဲ့အတွက် ထင်မြင်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ စမ်းသပ်စစ်ဆေးတဲ့အခါ hybridလေးတွေအတွက် ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျပါတော့တယ်။ ဒီဘေးဒုက္ခကနေကယ်တင်ဖို့ ‌ဆရာဝန်ဖြစ်သူက သမင်လူသားလေးကို ထွေးပွေ့ရင်း တောနက်ထဲမှာ ခြံစည်းရိုးခတ်လို့ သားအရင်းလိုပဲ ကျွေးမွေးပြုစုခဲ့ပေမယ့် သူတို့ရဲ့ခြံစည်းရိုးနားကို လူစိမ်းတစ်ယောက် ရောက်လာခြင်းနဲ့အတူ သမင်လူသားလေးဂက်စ်ရဲ့ ကံဆိုးမှုတွေ ရောက်ရှိလာပါတယ်။ ဂက်စ်လေးကိုကာကွယ်‌ရင်း အဖေဖြစ်သူလည်း သေဆုံးသွားတော့ ၁၀ နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်လေးတစ်ယေယာက်တည်း တောနက်ထဲမှာ ရှင်သန်ရတာ မလွယ်ကူတော့တဲ့အခါ ခြံစည်းရိုးအပြင်ကို ခိုးထွက်ဖို့ကြံပါတော့တယ်။ အပြင်လောကကြီးက အစိမ်းသက်သက်ဖြစ်နေတဲ့ဂက်စ်တစ်ယောက် လူဆိုးတွေ လောဘသားတွေလက်က လွတ်မြောက်နိုင်ပါ့မလား။ သူဘယ်လိုအန္တရာယ်တွေ ရင်ဆိုင်ရမလဲ။ အမေဖြစ်သူကိုရော ရှာတွေ့နိုင်ပါ့မလား။ သူ့ကိုဘယ်သူတွေကို ကူညီသွားမလဲဆိုတာကို Sweet Toothဆိုတဲ့ဒီကားလေးမှာ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုရင်း ...
TMDb: 8/10 647 votes
Loki (2021) Season 1 Complete Unicode ကဲ ဒစ်စနေးရဲ့ လိုကီ လာပါပြီ။ မာဗယ်စီးရီးအသစ် ၃ ခုမြောက်ပါပဲ။ ဝန်ဒါဗီရှင် နဲ့ ဖယ်လ်ကွန်တုန်းကလည်းအားလုံးကျေနပ်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ သူတို့တွေထက် ပိုပြီးမျှော်ရတဲ့ စီးရီးပေါ့ဗျာ။ လိုကီဟာ Endgame မှာ တက်ဆာရက်နဲ့အတူ လွတ်မြောက်သွားတာကို အားလုံးအသိပါ။ အခုကတော့ လွတ်မြောက်သွားတဲ့လိုကီကို TVA ဆိုတဲ့ စကြဝဠာရဲ့ အချိန်စီးကြောင်းတွေကို စောင့်ရှောက်သူတွေက ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပြီးအချိန်စီးကြောင်းကို ပြန်တည့်မတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် လှည့်စားခြင်းနတ်ဘုရားဆိုတဲ့အတိုင်း TVA ထဲမှာပါ ပြဿနာတွေ ပေါင်းစုံ ဖြစ်လာတဲ့အခါ…. Credit Review ဒီ Series ကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Khaing Zay Shune Lei နဲ့ Nora ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi ကဲ ဒစ္စေနးရဲ႕ လိုကီ လာပါၿပီ။ မာဗယ္စီးရီးအသစ္ ၃ ခုေျမာက္ပါပဲ။ ဝန္ဒါဗီရွင္ နဲ႔ ဖယ္လ္ကြန္တုန္းကလည္းအားလုံးေက်နပ္ၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ သူတို႔ေတြထက္ ပိုၿပီးေမွ်ာ္ရတဲ့ စီးရီးေပါ့ဗ်ာ။ လိုကီဟာ Endgame မွာ တက္ဆာရက္နဲ႔အတူ လြတ္ေျမာက္သြားတာကို အားလုံးအသိပါ။ အခုကေတာ့ လြတ္ေျမာက္သြားတဲ့လိုကီကို TVA ဆိုတဲ့ ...
TMDb: 8.6/10 597 votes
Mine (2021) Complete Unicode ငါပိုင်တဲ့ဟာ ငါ့အရာ ဆိုတာမျိုးက လူ့အပေါ်ယံလွှာ ရေပေါ်ဆီတွေကြားမှာ ရေပန်းစားတဲ့ စကားလုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အတ္တတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ အထက်တန်းလွှာတွေကြားက အားပြိုင်မှုတွေကို တင်ဆက်ထားတဲ့ ဟဲဗီးဒရာမာ ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လောင်ရမှာ ကြိုက်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးတွေအတွက် ငရဲမီးကို ဓာတ်ဆီနဲ့လောင်းသလို ခံစားရဦးမယ့် ဇာတ်လမ်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကြီးမင်းသမီးတွေ ဖြစ်တဲ့ Lee Bo Young နဲ့ Kim Seo Hyung အပြိုင်အဆိုင်သရုပ်ဆောင်ထားကြတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အတွဲအစပ်ကတော့ အတိုင်းထက်အလွန် တံခွန်နဲ့ကုက္ကားပါပဲ။ ဆိုဟီဆို( Lee Bo Young)က နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ ချယ်ဘိုမိသားစုရဲ့ ဒုတိယမြောက်သားနဲ့လက်ထပ်ဖို့အတွက် သူအလုပ်အကိုင်ကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ပါတယ် ချယ်ဘိုမိသားစု ဟျိုဝန်းကုမ္ပဏီကို လုပ်ကိုင်နေပြီးတော့ အရမ်းကိုချမ်းသာတဲ့မိသားစုတစ်စုလည်းဖြစ်ပါတယ် (ဇာတ်ကားကြည့်ရင်းနဲ့ မျက်ရည်ပါသုတ်ရမယ်နော် ချမ်းသာချက်က) မိသားစုရဲ့ ဒုတိယချွေးမအနေနဲ့ကော ကလေးရဲ့မိထွေးအနေနဲ့ပါ အဲ့မိသားစုထဲဝင်ဆန့်အောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီး နေထိုင်းရင်းနဲ့ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ သူကိုယ်သူပျောက်ဆုံးသလိုခံစားနေရတဲ့ ဆိုဟီဆို ဂျောင်ဆူဟွန်း (Kim Seo Hyung) ကတော့ ပထမသားနဲ့လက်ထပ်ထားတဲ့ ချွေးမကြီးဖြစ်ပြီးတော့ ထက်မြတ်တယ် အလုပ်လုပ်ရင်းလည်းတိကျတယ် မတူညီတဲ့မိသားစုနှစ်စုလာတဲ့ ချွေးမနှစ်ယောက် ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ကိုလက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ သူတို့ရဲ့ ပုံစံအစစ်အမှန်ကို ဘယ်လိုရှာဖွေကြမလဲ???? ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်တွေနေတဲ့ ဒီလောကကြီးနေ ...
Mine (2021) Complete
Undercover (2021) Complete Unicode ၁၉၉၁ ခုနှစ်က ဆန္ဒပြမှု ကနေ စခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ် ..... ဒုက္ခတောတွေကြားက ဆွတ်ပျံ့ကြည်နူးဖွယ်ရာ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ကနေ ...... ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ နွေးထွေးတဲ့ မိသားစု ဘဝလေး တစ်ခုဆီသို့ ...... ဟန်ဂျောင်ဟွန်း ဆိုတဲ့ ကောင်လေး နဲ့ ချွဲယွန်းဆူ ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းကနေ ...... လျှို့ဝှက်ပြီး သည်းထိတ်ရင်ဖို ဖြစ်ရတဲ့ နိုင်ငံရေးဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ ရှေ့နေမလေး ချွဲယွန်းဆူ က ရိုးသားပြီး အရည်အချင်းရှိတဲ့ ကောင်မလေး။ သူ မသိလိုက်တာက သူ့အမျိုးသားက ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက် သူလျှိုတစ်ယောက်။ ဒီကိစ္စတွေကို ချွဲယွန်ဆူးတစ်ယောက် ဘယ်အချိန်မှာ သိရှိလိုက်ရတာလဲဆိုတာကတော့ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာနမှူး အဖြစ် သူမကို လျာထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာ စပါတော့တယ်။ သူတို့မိသားစုထဲကို ထင်မှတ်မထားတဲ့အချိန်တစ်ခုက ရောက်ရှိလာပါတော့တယ် ..... နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲကောင်း တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီးတော့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်က BBC က ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ Undercover ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲကို နာမည် မပြောင်းလဲဘဲ ထုတ်လွှင့်ခဲ့တာပါ။ မူရင်းဇာတ်လမ်းတွဲတုန်းကလည်း IMDb ...
Undercover (2021) Complete
Sell Your Haunted House (2021) Complete Unicode Ji Ah က ဝိဉာဉ်တွေမြင်နိုင်တယ်။ ဒါကလဲ သူ့အမေဆီက အမွေရခဲ့တဲ့ စွမ်းရည်တစ်ခုပဲ၊ Daebak Realty ဆိုတဲ့ အိမ်ခြံမြေ အရောင်း ကုမ္ပဏီတစ်ခုပိုင်တယ်။ Ji Ah က အဲ့စွမ်းရည်နဲ့ အိမ်တွေမှာရှိတဲ့ မကောင်းတဲ့ တစ္ဆေ၊သရဲတွေကို မောင်းထုတ်ပြီး အိမ်တွေကို ရောင်းချတယ်။ တစ်နေ့တော့ Ji Ah က In Beom ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို တွေ့တယ်။ In Beom က လူလိမ်အကြီးစားတစ်ယောက်၊ သူရဲ့အကျိုးအတွက် သရဲတွေကို အသုံးချပြီး ငွေရှာတယ်။ တစ်ညမှာတော့ In Beomကနေ Ji Ah ဆီ အတူလက်တွဲမလားဆိုပြီး ကမ်းလှမ်းတယ်။ ဒီတော့ Ji Ah တစ်ယောက် ကမ်းလှမ်းချက်ကို လက်ခံမလား? လက်မခံဘူးလား? သူတို့နှစ်ယောက် ဘာတွေ ရှေ့ဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှသာ ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Credit Review Zawgyi Ji Ah က ...
Youth of May (2021) Complete Unicode စည်းကမ်းတင်းကြပ်တဲ့ ဖခင်ရဲ့လက်အောက်မှာနေခဲ့ရပြီး မတော်တဆမှုတစ်ခုကြောင့် ဆေးကျောင်းသားဘဝကနေ ဘွဲ့မရနိုင်သေးတဲ့အပြင် ဆရာဝန်ဘဝကိုပါ စွန့်လွှတ်ရမလိုဖြစ်နေတဲ့ ဟွမ်ဟီထယ်….. ဆင်းရဲပြီးချို့တဲ့ပေမယ့် ဘဝအတွက် ရုန်းကန်ကြိုးစားနေတဲ့ မာနရှင်သူနာပြုဆရာမလေး ဂင်မြောင်ဟီး….. အခြေအနေတစ်ခုကြောင့် နှစ်ယောက်သား ဆုံတွေ့ဖို့အကြောင်းဖန်လာတဲ့အခါမှာတော့…. လူငယ်သဘာဝအငွေ့အသက်လေးတွေနဲ့ရိုးသားကြိုးစားပြီး ကိုယ်ယုံကြည်ရာကိုလျှောက်လှမ်းကြိုးစားကြမယ့် လူငယ်လေးတွေရဲ့ ရိုဆန်ဆန်မြင်ကွင်းလေးတွေပါမြင်တွေ့ခံစားရဦးမှာပါ…. 18 Again,Sweet Home တို့နဲ့နာမည်ကြီးလူသိများလာတဲ့ မင်းသားချောလေးကြောင့် ကြည့်ရကျိုးနပ်စေမှာပါနော်…. Melodrama လေး ငတ်နေကြတဲ့သူတွေအတွက် သတင်းကောင်းပါလို့…. Credit Review Zawgyi စည္းကမ္းတင္းၾကပ္တဲ့ ဖခင္ရဲ႕လက္ေအာက္မွာေနခဲ့ရၿပီး မေတာ္တဆမႈတစ္ခုေၾကာင့္ ေဆးေက်ာင္းသားဘဝကေန ဘြဲ႕မရႏိုင္ေသးတဲ့အျပင္ ဆရာဝန္ဘဝကိုပါ စြန္႔လႊတ္ရမလိုျဖစ္ေနတဲ့ ဟြမ္ဟီထယ္….. ဆင္းရဲၿပီးခ်ိဳ႕တဲ့ေပမယ့္ ဘဝအတြက္ ႐ုန္းကန္ႀကိဳးစားေနတဲ့ မာနရွင္သူနာျပဳဆရာမေလး ဂင္ေျမာင္ဟီး….. အေျခအေနတစ္ခုေၾကာင့္ ႏွစ္ေယာက္သား ဆုံေတြ႕ဖို႔အေၾကာင္းဖန္လာတဲ့အခါမွာေတာ့…. လူငယ္သဘာဝအေငြ႕အသက္ေလးေတြနဲ႔႐ိုးသားႀကိဳးစားၿပီး ကိုယ္ယုံၾကည္ရာကိုေလွ်ာက္လွမ္းႀကိဳးစားၾကမယ့္ လူငယ္ေလးေတြရဲ႕ ႐ိုဆန္ဆန္ျမင္ကြင္းေလးေတြပါျမင္ေတြ႕ခံစားရဦးမွာပါ…. 18 Again,Sweet Home တို႔နဲ႔နာမည္ႀကီးလူသိမ်ားလာတဲ့ မင္းသားေခ်ာေလးေၾကာင့္ ၾကည့္ရက်ိဳးနပ္ေစမွာပါေနာ္…. Melodrama ေလး ငတ္ေနၾကတဲ့သူေတြအတြက္ သတင္းေကာင္းပါလို႔…. Credit Review Quality - Web-dl 1080p Episode 1 OneDrive , TeraCloud Episode2OneDrive , TeraCloud Episode3OneDrive , TeraCloud Episode4OneDrive , TeraCloud Episode5OneDrive , TeraCloud Episode ...
Jupiter’s Legacy (2021) Season 1 Complete Unicode Netflix ရဲ့ စူပါဟီးရိုး စီးရီးအသစ်လာပါပြီ။ သတ်ဖြတ်တာတွေကြမ်းတယ်၊ ဖောင်းဒိုင်းနည်းနည်းပါတယ်၊ အသားကုန်ဆဲတယ် ကလေးတွေပြဖို့နည်းနည်းခက်ပါမယ်။ ဇာတ်လမ်းကတော့ နာမည်ကျော် comic တစ်ခုကို ယူထားတာပါပဲ။ ယူနီယံဆိုတဲ့ စူပါဟီးရိုးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိပါတယ်။ စွမ်းအားတွေကတော့ စုံပလုံသုံနေတာပါပဲ။ ခေါင်းဆောင်ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း စူပါမန်းနဲ့ စွမ်းအားချင်းတူပါတယ်။ သူ့မိန်းမ၊ သမီး၊ သား၊ အစ်ကို၊ အကုန်လုံး စွမ်းအားကိုယ်စီနဲ့ပါ။ စူပါဗီလိန်တွေပါတယ်။ သမိုင်းအရှုပ်အရှင်းတွေပါတယ်။ ဒီခေတ်မှာ စူပါဟီးရိုး နဲ့ လူဆိုးဆိုတာ အဖြူအမည်း မသဲကွဲတော့သလို ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာတွေကလည်း သိပ်မရိုးရှင်းတော့ပါဘူး။ The Boys လိုပဲ နည်းနည်းမှောင်ပြီးနက်မယ့် စီးရီးအမျိုးအစားပါပဲ။ Credit Review ဒီ Series ကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Tracy ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi Netflix ရဲ႕ စူပါဟီး႐ိုး စီးရီးအသစ္လာပါၿပီ။ သတ္ျဖတ္တာေတြၾကမ္းတယ္၊ ေဖာင္းဒိုင္းနည္းနည္းပါတယ္၊ အသားကုန္ဆဲတယ္ ကေလးေတြျပဖို႔နည္းနည္းခက္ပါမယ္။ ဇာတ္လမ္းကေတာ့ နာမည္ေက်ာ္ comic တစ္ခုကို ယူထားတာပါပဲ။ ယူနီယံဆိုတဲ့ စူပါဟီး႐ိုးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ရွိပါတယ္။ စြမ္းအားေတြကေတာ့ စုံပလုံသုံေနတာပါပဲ။ ေခါင္းေဆာင္ကေတာ့ ထုံးစံအတိုင္း စူပါမန္းနဲ႔ စြမ္းအားခ်င္းတူပါတယ္။ သူ႔မိန္းမ၊ ...
TMDb: 7.4/10 303 votes
Taxi Driver (2021) Complete Unicode im Do-Kiဟာ ရေတပ်ကနေဘွဲ့ရပြီးတဲ့နောက် ရေတပ်အရာရှိတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်…. မိခင်ဖြစ်သူဟာ ကွင်းဆက်လူသတ်သမားတစ်ယောက်ရဲ့အသတ်ခံရပြီးတဲ့နောက် သူ့ဘဝလည်းပြောင်းလဲလာခဲ့တယ်… နောက်ပိုင်းမှာတော့ Kim Do-Kiက Rainbowတက္ကစီကုမ္ပဏီရဲ့ တက္ကစီယာဉ်မောင်းအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်…. အဲဒီကုမ္ပဏီက သာမန်ယာဉ်မောင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုမဟုတ်ပဲ အထူးတလည်ဝန်ဆောင်မှုအနေနဲ့ ကိုယ်ကလဲ့စားချေချင်တဲ့သူကို တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိတာပဲ…. ဖောက်သည်တွေက ကလဲ့စားချေဖို့တောင်းဆိုရင် Kim Do-Ki နဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေက အမိုက်စားဝန်ဆောင်မှုပေးကြတယ် တဖက်မှာလည်း ရဲမေHa-Naက Rainbowတက္ကစီကုမ္ပဏီကိုလိုက်လံစုံစမ်းနေတဲ့သူပါ….. Rainbowတက္ကစီကုမ္ပဏီရဲ့ ဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်တွေအတွက် စိတ်တိုင်းမကျသူဖြစ်ပေမဲ့ ဥပဒေကမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကို Rainbowတက္ကစီကုမ္ပဏီက ဖြေရှင်းပေးနိုင်လို့ သူ့စိတ်ထဲ သိချင်စိတ်ပြင်းပြခဲ့ပါတယ်…. ဒီကာလထဲမှာ ဘယ်လိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အမှုတွေ လူသတ်မှုတွေပေါ်လာကြမလဲ… မှုခင်း အက်ရှင်အသားပေးဇာတ်လမ်းတွဲမို့ အရိုတွေ ကြည့်ရတာ ပျင်းရိနေသူတွေအတွက် အလန်းစားပါပဲလို့ ပြောပါရစေ… Credit Review ဒီ Series ကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Ei Ko Ko Zin ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi im Do-Kiဟာ ေရတပ္ကေနဘြဲ႕ရၿပီးတဲ့ေနာက္ ေရတပ္အရာရွိတစ္ေယာက္ျဖစ္လာခဲ့တယ္…. မိခင္ျဖစ္သူဟာ ကြင္းဆက္လူသတ္သမားတစ္ေယာက္ရဲ႕အသတ္ခံရၿပီးတဲ့ေနာက္ သူ႔ဘဝလည္းေျပာင္းလဲလာခဲ့တယ္… ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ Kim Do-Kiက Rainbowတကၠစီကုမၸဏီရဲ႕ တကၠစီယာဥ္ေမာင္းအျဖစ္လုပ္ကိုင္ခဲ့တယ္…. အဲဒီကုမၸဏီက သာမန္ယာဥ္ေမာင္းကုမၸဏီတစ္ခုမဟုတ္ပဲ အထူးတလည္ဝန္ေဆာင္မႈအေနနဲ႔ ကိုယ္ကလဲ့စားေခ်ခ်င္တဲ့သူကို ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိတာပဲ…. ေဖာက္သည္ေတြက ကလဲ့စားေခ်ဖို႔ေတာင္းဆိုရင္ Kim Do-Ki နဲ႔လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြက အမိုက္စားဝန္ေဆာင္မႈေပးၾကတယ္ တဖက္မွာလည္း ရဲေမHa-Naက Rainbowတကၠစီကုမၸဏီကိုလိုက္လံစုံစမ္းေနတဲ့သူပါ….. Rainbowတကၠစီကုမၸဏီရဲ႕ ...
Star Wars: The Bad Batch (2021) Season 1 Unicode Star War ပရိတ်သတ်တွေအတွက် လက်ရှိပြသနေဆဲဖြစ်တဲ့ Animation Series တွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Clone Special Unit ဖြစ်တဲ့ The Bad Batch အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်. Star War Universe နှစ်သက်သူတွေ မဖြစ်မနေကြည့်သင့်တဲ့ Series လေးတစ်ခုပါ။ အပိုင်း ၁၆ အထိရှိပီး OnGoing Series ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Series ကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Myat Eaindray Khaing ဖြစ်ပါတယ်။ Zawgyi Star War ပရိတ္သတ္ေတြအတြက္ လက္ရွိျပသေနဆဲျဖစ္တဲ့ Animation Series ေတြကိုတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ Clone Special Unit ျဖစ္တဲ့ The Bad Batch အေၾကာင္းကို ႐ိုက္ကူးထားတာျဖစ္ပါတယ္. Star War Universe ႏွစ္သက္သူေတြ မျဖစ္မေနၾကည့္သင့္တဲ့ Series ေလးတစ္ခုပါ။ အပိုင္း ၁၆ အထိရွိပီး ...
TMDb: 9/10 187 votes
Vincenzo (2021) Complete Unicode Oppa Song Joong Ki ကတော့Vincenzo အဓိကဇာတ်ဆောင် Vincenzo Cassano အနေနဲ့သရုပ်ဆောင် မှာဖြစ်ပါပြီ" Vincenzo Cassano (or) Park Joong Hyung ဟာ အီတလီရှေ့နေ့ တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး" မာဖီးယားဂိုဏ်းတစ်ခုမှာ အကြံပေးအနေနဲ့လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်" သူဟာကိုးရီးယားမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့" ကိုးရီးယားလူမျိုးဖြစ်ပေမယ့်" 8နှစ် အရွှယ်တည်းက အီတလီမိသားစုတစ်စုကနေ မွေးစားခံခဲ့ရတဲ့ သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်" Song Joong Ki ဟာ အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ပြဿနာတစ်ခုကြောင့် ကိုးရီးယားကိုပြန်လာရတဲ့အခါ စကားပြောအရမ်းကောင်းတဲ့ရှေ့နေ Hong Cha Young နဲ့ သူ့ရဲ့တုံးအတဲ့အလုပ်သင် Jang Joon Woo နဲ့တွေ့ဆုံပြီး" တရားဉပဒေကနေ အပြစ်ပေးခြင်းမခံရတဲ့ လူဆိုးတွေကို ကြမ်းတမ်းတဲ့နည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုပြီး အပြစ်ပေးကြတာကို ရိုက်ကူးထားပြီး"ကြည့်ရှု သူတွေကို ရသမျိုးစုံ ပေးနိုင်မယ့် ဒရာမာ တစ်ကားဖြစ်ပါတယ်" (Hong Cha Young အဖြစ် Jeon Yeo ...
TMDb: 8.8/10 112 votes
Shadow and Bone (2021) Season 1 Complete Unicode IMDb Rating – 8.2/10ဒီနှစ်အတွက် မှော်စီးရီး ကောင်းကောင်းလေး ကြည့်ချင်နေတဲ့သူတွေအတွက် Shadow and Bone က တကယ် ကျေနပ်စေမှာပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းဟာ စိတ်ကူးယဉ်နိုင်ငံနဲ့ တိုင်းပြည်တွေအပေါ် အခြေခံပြီး တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ ရက်ဗ်ကာဆိုတဲ့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ နိုင်ငံကြီးတစ်ခုဟာ နိုင်ငံအလယ်မှာ ဘယ်လိုမှ ဖျက်ဆီးလို့မရတဲ့ အမှောင်တံတိုင်းကြီးနဲ့ ကာဆီးနေပြီး ကွဲပြားနေပါတယ်။ အရှေ့ဘက်နဲ့ အနောက်ဘက်ကို ခရီးသွားဖို့ အမှောင်တံတိုင်းကြီးကိုဖြတ်ဖို့ကလည်း အထဲက သတ္တဝါဆိုးကြီးတွေကြောင့် အန္တရယ်များလွန်းပါတယ်။ တံတိုင်းကြီးကို ဘေးကပတ်သွားတော့လည်း လမ်းတွေက ကြမ်းတမ်းပြီး ရန်သူတွေ ဝိုင်းနေတာပါပဲ။ ဒီတော့ ဒီတံတိုင်းကိုသာ ဘေးကင်းကင်း ဖြတ်ကူးနေနိုင်သူက နိုင်ငံရဲ့ အချမ်းသာဆုံးအဖြစ် လွယ်လွယ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရက်ဗ်ကာနိုင်ငံက လူတွေကလည်း သာမန်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ မှော်အစွမ်းကိုယ်စီရှိတယ်သူတွေလည်း ပါပါတယ်။ မီး၊ရေ၊လေ၊အမှောင်ကို ထိန်းနိုင်သူတွေ၊ လူကို ထိန်းချုပ်နိုင်သူတွေ စသည်ဖြင့် မျိုးစုံရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေမှာ ...
TMDb: 8.3/10 322 votes
Mouse (2021) Complete Unicode Vagabond ပြီးထဲက လွမ်းနေရတဲ့ မင်းသား Lee Seung Gi နဲ့ Oh! My Gran movie ထဲက မင်းသား Lee Hee Jun တို့ပါဝင်ထားပြီး မင်းသမီးတွေက Zombie Detective(2020) ထဲက Park Joo Hyun နဲ့ Train(2020)ထဲက Kyung Soo Jin တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်းအရေအတွက်က (၂၀)ပိုင်း ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး အပတ်စဉ် (ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ကြာသပတေး)နေ့များမှာ tvNရုပ်သံကနေ ထုတ်လွှင့်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းရဲ့အဓိကချက်က ဒီမေးခွန်းနဲ့ စတင်တယ် "မင်းသာ မျိူးရိုးဗီဇစမ်းသပ်ချက်ကနေ မိခင်ဝမ်းထဲမှာပဲ စိတ်ပညာကို စမ်းသပ်နိုင်မယ်ဆို....ပြီးတော့ အဲ့ကလေးက ဆိုက်ကိုတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် မင်း အဲ့ကလေးကို မွေးဖွားခွင့်ပေးမှာလား" Jung Ba Reum ဟာ ရဲဝန်ထမ်းအသစ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ တာဝန်ကျနေချိန် အစဉ်လိုက်လူသတ်သမားတစ်ယောက်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ကြုံတွေ့လိုက်ရတယ်။ ကံကောင်းလို့မသေပဲ အဲ့အဖြစ်အပျက်ကနေ သူ့ဘ၀ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါမှာတော့....... Jung Ba ...
River Where the Moon Rises (2021) Complete Unicode Pyong Gang (Kim So-Hyun) က ဂိုဂူလျောရဲ့ မင်းသမီးတစ်ပါးဖြစ်ပီး သူမက မွေးတည်းက စစ်သားတစ်ယောက်အဖြစ် လေ့ကျင့်သင်ကြားကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။ သူမရည်မှန်းချက်က ဘုရင်မဖြစ်ဖို့ပဲ။ တစ်နေ့တော့ On Dal (Ji Soo) ဆိုတဲ့ ကောင်လေးနဲ့တွေ့ဆုံသွားတဲ့အခါမှာတော့.....သူတို့နှစ်ယောက်ကြားက သမိုင်းနောက်ခံအချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကကော ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲ ဖြစ်ချင်တဲ့ ဘုရင်မကော ဖြစ်လားပါ့မလားဆိုတာကတော့ ဆက်လက်ကြည့်ရှု ပေးကြပါနော် Credit Review Zawgyi Pyong Gang (Kim So-Hyun) က ဂိုဂူေလ်ာရဲ႕ မင္းသမီးတစ္ပါးျဖစ္ပီး သူမက ေမြးတည္းက စစ္သားတစ္ေယာက္အျဖစ္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားႀကီးျပင္းလာခဲ့တယ္။ သူမရည္မွန္းခ်က္က ဘုရင္မျဖစ္ဖို႔ပဲ။ တစ္ေန႔ေတာ့ On Dal (Ji Soo) ဆိုတဲ့ ေကာင္ေလးနဲ႔ေတြ႕ဆုံသြားတဲ့အခါမွာေတာ့.....သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ၾကားက သမိုင္းေနာက္ခံအခ်စ္ဇာတ္လမ္းေလးကေကာ ဘာေတြဆက္ျဖစ္ၾကမလဲ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ဘုရင္မေကာ ျဖစ္လားပါ့မလားဆိုတာကေတာ့ ဆက္လက္ၾကည့္ရႈ ေပးၾကပါေနာ္ Credit Review Quality - Web-dl 1080p Episode 1 OneDrive Episode2OneDrive Episode ...
Sisyphus: The Myth (2021) Complete Unicode ဆစ္စဖတ္ ဆိုတာကတော့ ဂရိဒဏ္ဍာရီလာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို ကျောက်တုံးကြီးတစ်တုံးကို တောင်ထိပ်ရောက်အောင် တွန်းဖို့ အပြစ်ပေးခံထားရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တောင်ပေါ်ရောက်မယ် ကြံရင်း အစကနေ ပြန်လှိမ့်ရပြန်ရင်းနဲ့ သံသရာလည်နေပါတော့တယ်။ ပင်ပန်းပေမယ့် အချည်းနှီး ဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်တောင် ဆစ်စဖီယန် ဆိုပြီး စကားရပ်အနေနဲ့ သုံးကြပါတယ်။ ဒီကားကတော့ Time Loop နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဇာတ်ကားပါပဲ။ အချိန်သံသရာ ဘယ်လိုလည်ကြမလဲ ဆိုတာတော့ ကျွန်တော်တို့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ကြည့်ရပါမယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ .. ဟန်ထယ်ဆူ လို့ ခေါ်တဲ့ ဉာဏ်ကြီးရှင် အင်ဂျင်နီယာက အတိတ်ကို ပြန်သွားဖို့ စီစဉ်သလို ဂန်ဆောဟယ် ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကလည်း အနာဂတ်ကနေ ပစ္စုပ္ပန်ကာလကို လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ .. ဂန်ဆောဟယ် ရဲ့ အဖေက သူ့သမီးကို ဟန်ထယ်ဆူ နဲ့ မတွေ့ဖို့ မှာလိုက်ပါတယ်။ ဘာလို့ မှာခဲ့တာလဲ ဆိုတာကတော့ ဖန်သားပြင်ထက်မှာ ဆက်လက်ရှုစားကြပါစို့ဗျာ။ ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအနေနဲ့ ပတ်ရှင်ဟေး က သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ အချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သီအိုရီကို စိတ်ဝင်စားသူများ ...
The Falcon and the Winter Soldier (2021) Season 1 Complete Unicode အဓိက ဒီ series က Falcon နဲ့ Winter Soldier ကို focus လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ မမြင်ဖူးသေးတဲ့ သူတို့ရဲ့ Back story တချို့ကို စတင်မိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ Falcon ဆိုရင် သူ့ရဲ့ မိသားစု အကြောင်းတွေ ၊ သူ့မိသားစု နဲ့ သူရဲ့ relations တွေ၊ Winter Soldier ကတော့ သူရဲ့ brainwash လုပ်ခံခဲ့ရတဲ့ အတိတ်က စိတ်ဒဏ်ရာဟောင်းတွေကို မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ storyပိုင်းက နိုင်ငံရေးပိုင်း တော်တော်လေး အသာပေးထားသလို သူတို့ရဲ့ personal feelings တွေ ၊ lifestyle တွေကို သေချာလေး မိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ MCU ရဲ့ ပုံစံ3min တခါ jokes တွေ ထထ ဖောက်တာမျိုးလည်း မမြင်ရတော့သလို ...
TMDb: 7.7/10 1430 votes
Beyond Evil (2021) Complete Unicode Lee Dong-Sik ဟာ တစ်ချိန်ကအရည်အချင်းရှိတဲ့စုံထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.. အခုချိန်မှာတော့ မြို့ငယ်လေးတစ်ခုရဲ့ ရဲစခန်းမှာ အောက်‌ခြေသိမ်း အလုပ်ကအစ လုပ်ကိုင်ရင်းဘဝကိုအေး အေးဆေးဆေးဖြတ်သန်းနေ သူဖြစ်ပါတယ်... တစ်ရက်မှာတော့ အဲ့ဒီရဲစခန်းကို Han Joo Won လို့ခေါ်တဲ့ စုံထောက်တစ်ယောက်ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီး... Lee Dong-Sik ရဲ့အထက်လူကြီးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါတယ်..Han Joo-Won ကတော့ ထက်မြက်တဲ့စုံထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဂုဏ်ရှိတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းက လာသူဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာ လျို့ဝှက်ချက်တွေရှိပြီး အဖေဖြစ်သူကတော့ အမျိုးသားရဲဌာနရဲ့ စခန်းမှူးဖြစ်ဖို့ အလားအလာကောင်းရှိသူဖြစ်ပါတယ်.. ဒီအေးချမ်းတဲ့ မြို့ငယ်လေးမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် 20 တုန်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကွင်းဆက်လူသတ်မှုနဲ့ ဆင်တူအမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီကွင်းဆက်လူသတ်မှုဟာဆိုရင် Lee Dong Sik ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲသွားစေခဲ့ပါတယ်။ ဒီကွင်းဆက်လူသတ်မှုအဖြစ်မှန်ပေါ်ရေးအတွက် စုံထောက်နှစ်ယောက်ပူးပေါင်းပြီး လူသတ်သမားကို ဘယ်လိုဖမ်းမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရမယ့် ကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်လို့ လက်လွတ်မခံသင့်ပါဘူးနော် Credit Review Zawgyi Lee Dong-Sik ဟာ တစ္ခ်ိန္ကအရည္အခ်င္းရွိတဲ့စုံေထာက္တစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္.. အခုခ်ိန္မွာေတာ့ ၿမိဳ႕ငယ္ေလးတစ္ခုရဲ႕ ရဲစခန္းမွာ ေအာက္‌ေျခသိမ္း အလုပ္ကအစ လုပ္ကိုင္ရင္းဘဝကိုေအး ေအးေဆးေဆးျဖတ္သန္းေန သူျဖစ္ပါတယ္... တစ္ရက္မွာေတာ့ အဲ့ဒီရဲစခန္းကို ...
WandaVision (2021) Season 1 Complete Unicode ကဲ Avengers တွေထဲက Wanda နဲ့ Vision အတွဲလေးရဲ့ စီးရီး လာပါပြီ။ စီးရီးကိုတော့ sit-com ဟာသ ပုံစံနဲ့ အစပြုထားပါတယ်။ ဝန်ဒါနဲ့ ဗီရှင်တို့ဟာ ပျော်ရွှင်စွာ လက်ထပ်ထားတဲ့ စုံတွဲအဖြစ် တည်ရှိနေကြပါတယ်။ သူတို့တွေ ဘယ်လိုလက်ထပ်ခဲ့တယ် ဘာမှာရောက်နေတယ် ဘယ်ကလာတယ်ဆိုတာကို သူတို့ကိုယ်တိုင်တောင် မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ သန်းနို့စ် မသေခင်ကလား သေအပြီးလား ဝန်ဒါ soul stone ထဲမှာ ရောက်နေတာလား အခြား အပြိုင်စကြဝဠာလား အခြား reality လား ဆိုတာ မသိနိုင်သေးပါဘူး။ အပိုင်းအစကတော့ ရယ်စရာတွေ ပျော်စရာတွေနဲ့ပဲ အစပြုထားပါတယ်။ လျို့ဝှက်ချက်တွေကိုတော့ စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာ။ Credit Review ဒီ Series ကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Pyae Sone & Rashida ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi ကဲ Avengers ေတြထဲက Wanda နဲ႔ Vision အတြဲေလးရဲ႕ စီးရီး လာပါၿပီ။ စီးရီးကိုေတာ့ sit-com ဟာသ ပုံစံနဲ႔ အစျပဳထားပါတယ္။ ဝန္ဒါနဲ႔ ဗီရွင္တို႔ဟာ ...
TMDb: 8.5/10 1271 votes